श्रीमतीले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी २० कुरा श्रीमानको अगाडि नत्र….
रोचक श्रीमतीले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी २० कुरा श्रीमानको अगाडि नत्र….
सम्पादक : Nepal Online Patrika
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: विश्वका अधिकांश देशमा पुरुष मानसिकता नै हाबी देखिन्छ । दम्पत्ती बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउदा दुवैले धेरै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अनेक उपाय अपनाइन्छन् । त्यसमा पनि श्रीमतीले अझ बढी सम्झौता गर्नुपर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
श्रीमानका अगाडि श्रीमतीले गर्नु नहुने २० बुँदा –
श्रीमानसँग ठूलो आवाजमा कहिल्यै नबोल्नु ।
श्रीमानको कमजोरी परिवार र साथीको अगाडि नखोल्नु ।
सेक्स प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै नगर्नु ।
समुहमा रहँदा श्रीमानलाई पहिला जवाफ दिने मौका दिनु ।
बच्चाको अगाडि कहिल्यै श्रीमानलाई गाली नगर्नु ।
आफ्नो मायालाई पैसासँग तुलना नगर्नु ।
श्रीमानको अगाडि आफु धेरै व्यस्त नहुनु ।
उसलाई समय दिनु ।
श्रीमान र आफ्नो कामको तुलना नगर्नु ।
आफ्नो पूर्व प्रेमीसँग कहिल्यै तुलना नगर्नु ।
आफ्नो मुड अनुसार कहिल्यै कुरा नगर्नु । अरु पुरुषसँग कहिल्यै तुलना नगर्नु ।
श्रीमानको साथीको बारेमा कहिल्यै नराम्रो नबोल्नु ।
उसले तिमीसँग विहे गरेको भन्ने कुरा कहिल्यै नबिर्सनु ।
कहिल्यै पनि अरुलाई तिम्रो श्रीमानको ख्यान गर्नु नभन्नु ।
कुनैदिन श्रीमान खाली हात घर आए, उसलाई गाली नगर्नु । श्रीमानको पसिना ख्याल गर्नु ।
घरबाट बाहिर निस्कनु अघि श्रीमानको कपडा ख्याल गर्नु ।
आफ्नो साथीलाई श्रीमानको धेरै नजिक हुने मौका नदिनु ।
शौचालय गएको र लुगा लगाउने बेलामा धेरै हतार नगर्नु।
श्रीमानले चाहेको समयमा यौन सम्बन्ध राख्न तयार बन ।
किनभने पुरुषको लागि यो निकै महत्वपूर्ण छ ।
लामो समयसम्म यौन सम्पर्क नराख्दा उसलाई तनाव हुन्छ ।
यी दुई राशि भएकी युवतीसँग विवाह गर्ने पुरुष हुन्छन् अत्यन्तै भाग्यमानी:
काठमाडौं । पति र पत्नी एक अर्काको परिपुरक मानिने गर्छन् भने धार्मिक रुपमा पनि पत्नीको पतिको जीवन सुधार गर्न ठुलै भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्ने गरिन्छ। पति र पत्नी बीच हुने सामिप्यताले धेरै कुरामा असर गर्ने गर्छ। हरेक मानिसहरुको फरकफरक बानि मात्र मात्र नभई भाग्य पनि फरक हुने गर्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार केही यस्ता राशि भएका महिलाहरु हुने गर्छन् जसले आफ्नो पतिको भाग्य चम्काउनको लागि ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छन्।
मेष राशि, मेष राशि हुने महिलाहरु प्राय शान्त स्वभावका रहने गर्छन्। जसको पनि भनाइ धेरै गहन रुपमा सुन्ने बानी रहने भएका कारण यस राशिका महिलेहरु झगडा देखि पनि टाढा रहन्छन्। मेष राशि भएका महिलाहरु आफ्नो पतिलाई गल्ति देख्ने कुनै पनि मौका दिन नचाहने गर्छन्। आफ्नो पतिको धेरै ख्याल गर्ने हुँदा मेष राशि भएका पत्नी पाउने पुरुषलाई धेरै भाग्यमानी गरिन्छ। यस राशि भएका महिलाहरु आर्थिक रुपमा पनि बुद्धिमानी मानिने गर्छन्।
कन्या राशि, कन्या राशि हुने महिलाहरु आफ्नो हरेक जिम्मेवारी पूरा गर्न रुचाउने गर्छन्। यस राशिका महिलाहरु आफ्नो पतिको हरेक कार्यमा साथ दिने गर्छन्। आफ्नो दाम्पत्यजीवनमा धेरै खुशी रहने गर्छन्। आफु पनि छिटै खुशी हुने हुँदा पतिलाई दुखि हुने मौकानै दिदैंनन्। साथै यस राशि भएका महिलाहरुलाई व्यापार धेरै फाप्ने हुँदा पनि आफ्नो पतिको भाग्य चम्काउन धेरै सफल हुने गर्छन्।
कुन राशीका व्यक्तिले के गर्ने संकट हटाउन? जन्नुहोस
Kabita - September 25, 2020 0
अत्यन्त परिश्रम र मेहनतका बावजुद पनि कुनै काममा सफलता पाइरहनु भएको छैन भने केहि दोष हुनसक्छ ।
ज्योतिष शास्त्रः जन्म बारअनुसार कुन पेशा अंङ्गाल्दा हुन्छ फलिफाप ?
Nepal Online Patrika - September 25, 2020 0
शास्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने मानिसको जन्मबारले पनि उसको दैनिक जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । शास्त्र अनुसार कुन बारमा जन्मिएका मानिसले कस्तो पेशा/व्यवसाय गर्दा उसका लागि श्रीवृद्धि हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँ केही जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
ब्रेकअप भयो ? यी ८ तरिकाले सहजै भूल्न सकिन्छ पूर्व प्रेमी-प्रेमिकालाई नआत्तिनुस्,
Kabita - September 24, 2020 0
प्रेम सम्बन्ध टुटेपछि सबैको मन पनि टुट्छ, मन आत्तिन्छ, के गरौं, कसो गरौँ हुन्छ । अनि निन्द्रा, भोक र प्यास नै हराउँछ । मानिस पागलै सहर भईदिन्छ । तर सधैं यसरी जीवन त चल्दैन ।
सुन र पैसा सपनामा देखेमा के हुन्छ?
Smita - September 24, 2020 0
तपाईले यदि सपनामा पैसा भेट्नु भयो भने तपाई को जीवन अचानक केहि मोड आउने वाला छ भनेर जान्नुहोस् । त्यो मोड खस गरि राम्रो पनि हुन सक्छ र नराम्रो पनि ।
जब श्रीमानलाई घर मै काम गर्ने श्रीमतीले मेरो कमाई भन्दै १० करोड रुपैयाँ दिइन, काम थाहा पाउँदा सबै चकित
अली र महनूर अल्वी, नेपालको प्रदेश ३ निवासी हुन् । उनीहरु २००४ देखि एक अर्का अनुबन्धित थिए । त्यही साल उनीहरुबीच विवाह भयो ।
आप्रवासनको क्षेत्रमा सुरक्षित नेपाललाई सघाउन स्विट्जरल्याण्डको तत्परता
स्विट्जरल्याण्डकी राष्ट्रपति सिमोनेता सोमारुगाले महामारीको अहिलेको असहज अवस्थामा सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताएकी छन् ।
बायर्न म्युनिखले चुम्यो सुपर कपको उपाधि
जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले यूईएफए सुपर कपको उपाधि हात पारेको छ ।
बत्ति किन झ्याप्प झ्याप्प जाँदैछ ? प्राधिकरणले दियो यस्तो स्पष्टीकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रमुखबाट ४ बर्षे कार्यकाल सकाएर कुलमान घिसिङ विदाई भएसँगै जनताले बत्ति जान थालेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।धेरैले कुलमान घिसिङ नहुनाले झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जाने गरेको समेत टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
Nepal Online Patrika Pvt. LTD
Registration No: 1092-264-15 (NOP)
Address: Charkhal Road, KTM, Nepal
Contact NO: +977-98400-89-198
© 2007 - 2020 All Rights Reserved by Nepal Online Patrika
जब श्रीमानलाई घर मै काम गर्ने श्रीमतीले मेरो कमाई भन्दै १०...